Induction Brazing Stainless Steel-DaWei RF Brazing Heater
Induction Brazing Stainless Steel
1st Chikumbiro: Braze hub assembly kuenda kusingano
2nd Chikumbiro: Braze Guru tube kuti inyore pamwe
Chinyorwa: Yekutanga Kushanda: Simbi hub musangano uye tsono 1 ″ dia (0.1mm) Yechipiri Kushanda: Simbi chubhu 2.5, OD (2 mm) uye mhete
Kupisa 1400 ºF (760 ºC)
Kakawanda 325 kHz yekumisikidza tsono 0.1 ″ dia (2.5mm) 259 kHz yekusungira mhete kune simbi chubhu 1-OD (25.4 mm)
Zvishandiso • DW-UHF-4.5KW inotengesa kupisa system, yakagadzirirwa a
mutsara webasa wakadzika ane mbiri .66 μF capacitors kweiyo yose ye1.32 μF
• Zvinyorwa zviviri zvekudziya moto, zvakagadzirirwa uye zvakagadzirirwa zvakananga nokuda kwechidimbu ichi.
Kugadzirisa 1st yekushanda: A 2-turn helical coil inoshandiswa kupisa gungano rembambo padare retsono kwe seconds 10. Ikopi inogadziridza kupisa pamusana chete, sezvinoita nheyo ine magnetic uye chibato chisina maginiti. A small
ruzivo rwakakosha bhiza rinoshandiswa kupa huwandu hunokwana hwekugadzira chikafu chakasimba chekugadzirisa chisungo. 2nd yekushanda: A 3-turn helical coil inoshandiswa pakuburitsa tambo yakawanda kusvika kumhete yechina ye 3-5 maminitsi. Bhandi yebhanhire ndeye
yakashandiswa kupa huwandu hunokwana hwekugadzira hutano hwakanaka hunofadza.
Migumisiro / Kubatsira Kunokisa kupisa kunopa:
• Kunyange kugoverwa kwekutsvaira, kunopa kunyange kutenderera kwebraze alloy nokuda kwechibvumirano chinofadza
• Kugadzirisa kushandiswa kwezvinhu kunobvumidza kuti chigadziro chimwechete chinoshandiswa kune zvidimbu zviviri zvakasiyana-siyana izvo zvinodhura kuchengetedza.
Categories Technologies Tags kusungira simbi tsvina, High Frequency brazing simbi isina chinhu, RF kushambadza simbi isina chinhu Post navigation
Brazing Copper Bars ne Induction